कोमल वलीका चर्चित तीजगीत
‘मलमलकिरी जुनकिरी’, ‘तुल्सीपुरमा म जाँदाखेरि’जस्ता लोकगीतले गायिका कोमल वलीलाई छुट्टै परिचय दिएको थियो । ०६३ सालमा उनले ‘पोइल जान पाम्’ तीजगीत गाइन् । त्यसले ‘मलमलकिरी’ गायिका कोमल वलीलाई अर्कै चर्चाको दुनियाँमा पुर्‍यायो । त्यसपछि उनले तीजगीतमा ‘प्रयोग’ गर्न थालिन् । शब्दमा मात्रै होइन, संगीतमा पनि नयाँ ‘टेस्ट’ दिइन् । कहिले शब्द त कहिले संगीतका कारण उनका तीजगीत चर्चामा रहे । आफ्ना पाँच चर्चित तीजगीतको पृष्ठभूमीबारे कोमल के भन्छिन् ? उनकै शब्दमा :
पोइल जान पाम्
तीजगीत गाइरहे पनि खासै चर्चा थिएन । त्यसैले केही नयाँ गर्नुपर्‍यो भन्ने सोच्दै थिएँ । त्यसै सन्दर्भमा ‘तुल्सीपुरमा म जाँदा खेरी’ भन्ने गीत लेख्ने गीतकार दण्डपाणी पाण्डेजीलाई घरमै बोलाएर सल्लाह गरें । उहाँलाई ‘अविवाहित केटीले तीजमा माग्ने वरबारे गीत गरौं न त यसपाली’ भनें ।
उहाँले पनि ‘त्यसो भए म एउटा झकास गीत लेख्छु नि त’ भन्दै गीत लेख्न थाल्नुभयो । चिया पिउँदै उहाँले केही समयमै एक अनुच्छेद लेख्नुभयो र सुनाउनुभयो –
तिजैमा ब्रत बसी पूजा गरें भगवान्
आश गर्छु अब त बनोस् मेरो काम
सधै भरी माइतीघरमा बस्ने मलाई मन छैन
अहिलेकै सालमा पोइल जान पाम्
ओहो ! मलाई निकै राम्रो लाग्यो । त्यसपछि उहाँले हरफ–हरफ लेख्दै सुनाउँदै गीत पूरा गर्नुभयो ।
त्यो गीतमा मैले पछि थपें –
पोइल जान पाम् शिब पोइल जान पाम्
पोइ पाइयोस् भनेर जप्छु तिम्रै नाम
त्यतिबेला मेरो आफ्नै म्युजिक कम्पनी थिएन । त्यसैले म्युजिक नेपाल गयौं । त्यहाँ गीत मन पराउनुभयो । पाण्डेजीले भाका भनेपछि शिलाबहादुर मोक्तान संगीत गर्नुभयो । उहाँले केही ठाउँमा गीत मिलाई दिनुभयो पनि । तालका कारण पनि ‘क्याची’ होलाजस्तो लाग्यो ।
तर, गीत रेकर्ड गर्नेबेला समस्या आयो । म्युजिक नेपालमा भाका र शब्द पास गर्नुपर्ने । त्यसबेला पोइल भन्ने शब्द नराखौं । शब्दकोषमा नकारात्मक अर्थ छ, त्यसैले ‘बिहे गर्न पाम्’ भन्ने राखौं भन्ने सुझाव आयो । तर गीतकारले मान्नुभएन । गीतमा आफैंले बर छानेर जाने अर्थलाई पोइल शब्द प्रयोग गरिएको थियो । उहाको तर्क थियो – लोकगीत सलल पानीजस्तो बग्नुपर्छ । त्यसैले पोइल शब्द नै ठीक छ ।
अन्तत: त्यही शब्द राखियो । जब एल्बम बजारमा आयो बजार पिटिहाल्यो नि । गीत आफैंमा राम्रो त छँदै थियो, अर्को कुरा त्यो गीत मेरो जीवनसँग मिल्दोजुल्दो भयो । म अविवाहिता । मैले ‘पोइल जान पाम्’ गीत गाउँदा कोमल वलीले आफ्नै अन्तरआत्माको कुरा बोली भन्ने पनि धेरैलाई परेको रहेछ ।
तर वास्तविकताचाहिं त्यस्तो होइन । त्यो संयोगमात्रै हो । किनकि गीतकारले मेरो होइन कि सबै अविवाहिता युवतीको मनोभावनालाई उतारेर गीत बनाउनुभएको थियो ।
यस गीतको सकारात्मक/नकारात्मक दुवै कमेन्ट आए तर गीत एकदम चल्यो । अहिले पनि म गएको कार्यक्रममा यो गीत धेरैको रोजाईमा पर्छ ।
गोजीमा गाँठ भा’को
पोइल जान पाम् गीतको प्रतिक्रियामा ‘पोइल जान पाम् भन्नेलाई मैले लान पाम्’ भन्ने गीत आयो । त्यो गीत मिमम क्षेत्रीले लेखेका थिए । मलाई उनको मेलोडी मलाई निकै मन परेको थियो ।
अर्को बर्ष राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ सरकार पनि बन्यो । आर्थिक समृद्धिको कुरा उठ्यो । त्यसैले युवालाई समृद्ध बन्न उत्प्रेरित गर्ने गीत गर्न मन लाग्यो । युवामा मिहिनेत कम गर्ने संस्कृति छ । मेहनत गोजीमा ‘गाँठ’ टन्न बनाउन उत्प्रेरित गर्ने भावको गीत लेख्न मिममलाई भनें । उनले निकै राम्रो गीत लेखे –
बर्ष दिनको तीज आयो गाउछु तीजकै गीत
फेरि पनि पुकार गर्छु महादेवसित
बसेकै छु तीजमा ब्रत गरेकै छु धर्म
अब त सुन्देउ शिब यो चेलीको मर्म
कसलाई के भनौं र खोई खोई
आहा मनमा आट भाको गोजीमा गाँठ भाको
त्यत्तिको मर्द भेटिएन कोही कोही
यो गीत पनि निकै चल्यो । यो गीतलाई पनि कतिले मेरो जीवनमा जोडेर हेरे । उनीहरुले ‘कोमल वलीले गोजीमा गाँठ भएको नपाएर बिबाह गरिन’ पनि भने । तर यो गीतको उद्देश्यचाहिं युवालाई मेहनत गर्न उत्प्रेरित गर्ने हो ।
अहिले पनि म कार्यक्रम गर्न जाँदा यो गीतको निकै माग आउँछ । म पनि गाउनुअघि ‘गोजीमा गाँठ भएको कोही छ ?’ भनेर सोध्छु । अनि सबैले हात उठाउन थाल्नुहुन्छ । त्यसपछि गोजीमा गाँठ टन्न हुनका लागि अध्ययनको महत्वबारे भन्छु ।
यो गीत शिवलाई सम्बोधन गरिएको गीतकै ‘सिरिज’ हो । नयाँ तीज गीतबारे गीतकार दण्डपाणीजीसँग सल्लाह गर्दा पोइल जान पाम्कै निरन्तरता हुने गरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो । उहाँले ‘पोइल जान पाम् भन्ने गीत कोमल वलीकै जीवनमा आधारित भन्ने भएको छ । अब त्यसलाई आधारित बनाएर म अर्को गीत लेख्छु नि’ भन्नुभयो ।
भोकै बसे जागराम बत्तिमा तेल थपेर
धेरै गरे पुजा आजा तिम्रै नाम जपेर
आखिरीमा बनायौ निराश
धत्तेरिका शिवजी रहेछौ बदमास
उहाँले गीत लेखेर सुनाउनुभयो । मलाई निकै राम्रो लाग्यो र गाएँ । यसको निकै टिका टिप्पणी पनि भए । भगवानलाई गाली गरेको भनेर नेपाल टेलिभिजनले त प्रोमो नै बजाएन । तर गीत राम्रो र फरक थियो । त्यसैले चर्चा पनि भयो । अहिले पनि दिदिबहिनीहरुको रोजाईमा यो गीत पर्छ ।
विदेशमा मात्रै होइन, नेपालमा पनि युवायुवती डिस्कोमा गएर रमाइलो गर्ने संस्कृति विकास भइसकेको छ । त्यो देखेर तीजमा डिस्को फ्लेवरको गीत गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो ।
त्यसबेला संगीतकार बिजु बज्रलाई सम्झिएँ । उहाँको संगीत मलाई निकै मन पर्छ । उहाँलाई मैले डिस्कोमा तीज गीत गर्न मन लागेको बताएँ । उहाँले दुई दिनको समय माग्नुभयो । दुई दिनपछि संगीत सुनाउनुभयो । मलाई निकै मन पर्‍यो । त्यो संगीतमा गीतकार रमेश बिजी शब्द लेख्न भनें । रमेशजीले गज्जबको गीत लेख्नुभयो :
आधुनिक फेसन छिनेको कम्मर नाचिन्छ कसेर
भन्नेको मुख थुनिन्न क्यारे बन्धनमा बसेर
सुन दिदी कि कसो बहिनी
जमानासगै फेरियो चिज
नाचौ हामी डिस्कोमा तीज
तिजको विशेषता नै नाच्ने हो । यो गीत डान्सिङ फ्लेवरकै भएको धेरैले मन पराउनुभयो ।
मलाई गजल निकै मन पर्छ । गाडीमा पनि गजल सुनिरहन्छु । म गाडी चलाँउदा वा कतै जाँदा नयाँ गीत के गर्ने भन्ने सोचिरहेको हुन्छ र नयाँ केही आयो भने रेकर्ड गर्छु । एकदिन मलाई गजलमा तीजगीत गर्ने सोच आयो ।
यो बिषयमा संगीतकार गैरे सुरेशसँग सल्लाह गरें । उहाँले निकै निकै उत्साह देखाउनुभयो । त्यसपछि मैले सपर्मणले ओतप्रोत तीज गजल लेखिदिन सुपरिचित गजलकार कृष्णहरि बराललाई भनें ।
उहाँले मलाई त्यसै दिन ‘स्थायी’ सुनाउनुभयो –
हामी मनाउछौं यो तिज पतिदेवकै लागि
चढाउँछौ हरचिज पतिदेवका लागि
मलाई निकै मन पर्‍यो । त्यसको केही दिनमा उहाँले सुन्दर गजल तयार पार्नुभयो । त्यसमा गैरे सुरेशले संगीत गर्नुभयो । संगीत पनि असाध्यै राम्रो बन्यो । शिव विकले भिज्युअल पनि निकै राम्रो बनाउनुुभयो । यो गजलको मेलोडीले धेरैलाई आकर्षित गर्‍यो । यसको भिसिडि पनि उल्लेख्य बिक्रि भयो ।